Pareinma ပရိမ္မ, Kyansittha’s ကျန်စစ်သား / ကလန် စစ်သာ birthplace | Nyiwin's Blog
« A visit to the Thagara Pyu ancient city, Laung Lon, Dawei, Tenerisserim, Myanmar
Interesting aprons I have seen »
Pareinma ပရိမ္မ, Kyansittha’s ကျန်စစ်သား / ကလန် စစ်သာ birthplace
Every Myanmar knows about Kyansit min / king Kyansittha, but not everyone knows where he was born.
Kyansit min / King Kyansitthar ကျန်စစ်သား / ကလန် စစ်သာ
King Kyansittha was born in Pareinma ပရိမ္မ / Payeimma, Sagaing_far from the capital Bagan. It is located on the northern bank of the Chindwin river not far from where it joins the Ayeyarwaddy.
Although there are differences regarding the birth date of King Kyansittha as mentioned in various chronicles, it is generally accepted that he was born 21 July 1030 Tuesday, 5th waning of Wagaung 392 ME
There also has been much controversy regarding his ancestry. There has been traditional stories concerning the origin of his name and this too has been debated by those who hold different views.
It is mentioned that Pyinsa Kalayni (Burmese: ပဉ်စကလြာဏီ [pjɪ̀ɴsa̰ kəljənì]) was the mother of King Kyansittha of Pagan Dynasty of Burma (Myanmar). Burmese chronicles give many inconsistent stories about her, her son and her brief husband Anawrahta. Most are regarded as legends.
She wasaprincess of Wethali Kingdom, who was sent to marry Anawrahta by her father the ruler of Wethali. Wethali / Vesali is in the present-day Rakhine State and was the capital of Rakhine at the time and just north of the present day Mrauk U.
However, although it has been written that the name of the princess was Pyinsa Kalayni (Burmese: ပဉ်စကလြာဏီ [pjɪ̀ɴsa̰ kəljənì]) I believe there is an error and that the real name is Pyinsar Kalayarni (Burmese: ပဉ်စာကလြာဏီ because at the time of Anawratha, Vesali no longer was the Rakhine capital but Pyinsar ပဉ်စာ was.
The Waytharli ဝေသာလီ / Vesali era ended AD 794, well before the reign of Anawratha. This was followed by the capital being built at Sambawak by Saw Shwe Lu (Nga Tong Mong) who moved the capital again to the Le Mro river valley and established Pyinsa. There followedaperiod of the shifting of the capital to Parein, Taung Ngu and Laungkret / လောင်းကြက် all on the Le Mro river_hence the river came to be known as Le Mro / လေးမြို့ (meaning4cities in Rakhine language and also in Burmese too although pronounced differently).
Wikipedia: On her way to Pagan, she (Pyinsa Kalayni) became intimately involved with Yazataman, the Pagan official charged with guarding her. The official dispersed her retinue of 80_a few atastop on their way to Bagan. At Pagan, she was married to Anawrahta. Soon after the marriage, Yazataman reportedly pointed out to Anawrahta that she could not beatrue royal princess because she lackedaretinue. Anawrahta then banished Pyinsa Kalayni, who was then pregnant, an area near Sagaing _Pareinma. There, she gave birth to Kyansittha and raised him by herself.
The chronicle stories here are filled with many inconsistencies. The chronicles claim that Anawrahta was already king when Pyinsa Kalayni was sent. But Anawrahta did not become king until 1044. Kyansittha was born in 1030. Moreover, it was unlikely that the ruler of Wethali would have sent his daughter to Anawrahta who until 1044 wasaprince but not to Sokkate, the king himself. The chronicles also claim that Anawrahta tried to kill off all babies in the year that Kyansittha was born because his astrologers predicted thatanewborn would be king. Again, Anawrahta was not the king.
There are stories regarding the killing of pregnant women earlier on Anawratha’s orders because of the astrologers (ponnas) first predicted that the future king will be born in the north. မြောက်အရပ်မှာ မင်းလောင်းပေါ်မည်။ This is also in contradiction to the tradition that Pyinsa Kalayni was his mother. If it were so, why were other pregnant women killed too? It would be sufficient to order the killing of Pyinsa Kalayarni as her whereabouts would be known to the authorities. Anyway, as has been passed on, the pregnant Pyinsa Kalayarni managed to evade the killers and the future king was born at Pareinma.
There was another episode in which Anawratha asked the astrologers about the future king and on being told that the boy was still alive and attending the monastery school, boys that age were killed on Anawratha’s orders but Kyansittha managed to elude the killers and lived on. It was much later that Anawratha asked the astrologers about the topic again. This time, they said the young man was still alive and also the fact that he would not be successor of Anawratha but only that of the next king. Anawratha was relieved that this future king will do him no harm. He had him searched for and brought to Bagan. Asasurvivor of multiple purges, he was called Kyansittha_ the soldier (army officer) who remains” / ကျန်စစ်သား in Burmese.
It has also been mentioned in Wikipedia that_History shows that Anawrahta did not seem to know (or care) about her alleged affair with Yazataman, and believed that Kyansittha was his son. He recalled Kyansittha to Pagan in the mid-1050s, and appointed the 15-year-old Kyansitthaasenior commander in his army. Only the royalty could becomeasenior commander atayoung age. However, actually, Kyansittha would be in his mid 20s at the time as he was born in 1030.
The fact that Kyansitthar was the son of Anawrahta is completelyamade-up story by later historians. The inscription by Kyansithar himself described that his paternal ancestors decended from sun အာဒ္ဒိစ နေမျိုး၊ and his maternal ancestors from oake-shit thee ဥသျှစ်သီးမျိုး. He claimed himself to be reincarnation of Vishnu ဗိဿနိုး နတ်မင်းကြီး ၀င်စား သူဖြစ်. If he were the son of Anawrahta, there is no reason to have written like that and hid the truth. So he clearly wasacommoner without any royal lineage, but could reunite the country during anarchy period after war between Sawlu and Ngayamankan.
ရွှေစည်းခုံ ကျောက်စာ စစချင်း- ငါသည် ဂြီက္မေတြ (ပျူမြို့ တော်) ကိုတည်သော ဗိဿနိုး နတ်မင်းကြီး ၀င်စား သူဖြစ် တော့သည် လို့ တွယ်လိုက်ပါတယ်။ ဖခင် က အာဒ္ဒိစ နေမျိုး၊ မိခင် က ဥသျှစ်သီးမျိုး လို့ရေး ပါတယ်။ အနိ ရုဒ္ဓ ရဲ့ သားလို့ ဒီကျောက်စာ မှာလည်း မတွေ့၊ ဘယ်ခေတ်ပြိုင် ကျောက်စာ မှာမှ မတွေ့ရပါ။
ထိလိုင်မင် ကို အနိ ရုဒ္ဓ ရဲ့ သား ဆိုတဲ့ အဆိုကို ပယ်ပြီး ငတပါးမင်း လို့ယူရ ပါမယ်။ အများ သူငါ ထဲမှာ အစွမ်း အစ အရှိဆုံး ကျန်နေ ရစ်တဲ့ စစ်သား ကြီး မို့ ကျန်စစ်သား လို့ခေါ်တယ် ဆိုတဲ့ စကား ဟာလည်း ရီစရာ တောင်ကောင်း လောက်အောင် လွဲပါတယ်။ ကလန် စစ်သာ လို့ ကျောက်စာ မှာ တွေ့ ရတာ တော့ရှိတယ်။ ကလန် ဆိုတာ အုပ်ချုပ်ရေး အရာ ရှိ ရာထူး၊ စစ်သာ ဆိုတာ အများသုံး ခုခေတ် စစ်သား မဟုတ်။ စစ်သား လို့ အဲဒီ ခေတ်က မခေါ်၊ စစ် သူရဲ လို့သာ ခေါ်ပါတယ်။ စစ်သာ က ရိုးရာ အလိုက် မြို့ နယ် ကျေးရွာ ကိုအုပ်ချုပ် ရသူ လို့ အဓိပ္ပါယ် ရတယ်။ ၀မ်းတွင်း မြို့ နယ်၊ ထီးလှိုင် မြို့ သူကြီး၊ ရွာသူကြီး လို့ပြောတာပါ။
Pareinma isavillage with many pagodas commemorating the early life of Kyansittha there.
Ein Taw Yar pagoda အိမ်တော်ရာ စေတီ
The Ein Taw Yar pagoda အိမ်တော်ရာ စေတီ ´
The Ein Taw Yar pagoda အိမ်တော်ရာ စေတီ ´(ကျန်စစ်သား မင်းနေခဲ့သည့်အိမ်နေရာ တွင် တည်ထားသည်) is built on the site where the boy Kyansittha (his childhood name is not known) and his mother’s house was.
Hinn Kharr temple `ဟင်းခါးဂူ စေတီတော်
Another is the Hinn Kharr temple `ဟင်းခါးဂူ စေတီတော်´ (ကျန်စစ်သား မယ်တော် ဟင်းခါး ချက်သောက်ခဲ့ သော နေရာ တွင် တည်ထားသည်) built on the spot where Kyansittha’s mother cooked Hinn Kharr (bitter) soup.
Areindamar pagoda `အရိန္ဒမာ စေတီတော်´
There is the Areindamar pagoda `အရိန္ဒမာ စေတီတော်´ (ကျန်စစ်သား လှံကစားရာ တောင်ဘက်၌ လှံသွားကျရောက်သည့် နေရာတွင် တည်ထားသည်) where the Areindamar lance fell. This episode must have happened during the time when Kyansittha ran into hiding, taking the Areindamar lance with him. It shows that Kyansittha sojourned in Pareinma at least forawhile during his first escapade from king’s Anawratha’s wrath although his first exile (1070s – 1077) was mostly at Kaungbyu (likely in the Sagaing District), and where he got married to Thanbula, niece of the head abbot of the local monastery. He was in his early 30s (actually was in his 40s). He lived there for the remainder of Anawrahta’s reign until 1077.
Enormous lion of the Hti Hlaing Shin pagoda ထီးလှိုင်ရှင် ခြ င်္သေ့ ကြီး
The lion of the Hti Hlaing Shin pagoda ထီးလှိုင်ရှင် ခြ င်္သေ့ ကြီး
On the bank of the Chindwin river is the enormous lion of the Hti Hlaing Shin pagoda ထီးလှိုင်ရှင် ခြ င်္သေ့ ကြီး တည်နေရာ ၊ ၊ ချင်းတွင်းမြစ် ကမ်းနဖူး built by King Kyansittha after he became king. There is only one lion statute ထူးခြားချက် ၊ ၊ တစ်ကောင် တည်းရှိခြင်း၊ ပါးစပ် ရာ ဇဝင် များ အရ ပုံပြင်ဆန်၍ အများ စိတ်ဝင်စား ကြခြင်း which is peculiar as there are usually2lions elsewhere.
View of the Hti Hlaing Shin pagoda from the river side
Pareinma isanice place with splendid sunset views.
sunset view of the Chindwin at Pareinma
After King Kyansittha’s death, Pareinma faded into peaceful oblivion until early this year, 2015, when there wasanoviciation ceremony of grandiose scale nearby, and the news made national headlines.
For the sake of those who cannot read Burmese, I will write about the 5000 novice ceremony, but I advise Burmese reading visitors to read the news extract about it and the news articles in Burmese towards the end of the blog following the post script.
The 5000 novices initiating ceremony
The 5000 novices initiating ceremony was held near the Pareinma village, Myaung townshop, Sagaing Region 15 May to 1 June 2015 by the Shwe Than Lwin Company (Sky Net) under the guidance of the Koe Hse Has Sayardaw ကိုးဆယ်ဆအနန္တမေတ္တာရှင် ဆရာတော်, amounting to the total of 50000 lakhs kyats (5000,000,000 Kts /5Billion). It is the most elaborate ceremony seen in recent years and 5000 boys of 10 to 16 years age in Sagaing Region and the Pa O, Shan, Kayin, Mon and Naga boys from afar, all of them who have not been initiated previously entered novicehood. It has been arranged since February by an abbot / sayardaw of Magyibote village monastery မကျည်း ဘုတ် ရွာကျောင်း.
Eveyday, over 10,000 people are being fed in relation to the ceremonies which will last till the end of the May.
The main ceremony hall and the dining hall are built on the3acre groundnut fields outside Buu Kaing village, along with buildings for the novices, clinic, information centre and toilets.
Opening ceremony 15 May 2015
The opening ceremony was held on 15-May.
The donors of the Shwe Than Lwin Company (Sky Net)
The would be novices ရှင်လောင်းများ
The ceremonial procession was led by the elders holding the flowers for Buddha and Pa-riek water pots.
Next came the Buddha image vehicle in the shape ofaNagar (dragon) breathing out smoke.
the Buddha image vehicle in the shape ofaNagar (dragon) breathing out smoke
Galon ဂဠုံ,amythical bird
Then comes the Galon,amythical bird, followed by elephants, horses, ceremonial bullock carts, and people in Bagan, Ava and Konebaung style attire.
the first of the9elephants with the to be novice ရှင်လောင်း
another of the9elephants with the novice to be ဆင်စီးရှင်လောင်း
novices to be on 108 horses မြင်းစီးရှင်လောင်းများ
novices to be on 1 of 90 ceremonial bullock carts လှည်းယာဉ်ကြော့စီးရှင်လောင်းများ
ceremonial bullock cart with novices to be နွား လှည်းယဉ်ကြော့စီး ရှင်လောင်းများ
Bagan era attire
There are many people looking on along the route, amounting to tens of thousands. The famous traditional opera star Mandalay Thein Zaw performed the ceremonial rites.
In the central hall are Chinese style dragons and the statutes of the7day animals_Galon, tiger, lion, elephant, 1 tusk elephant (hine ဟိုင်း), guinea pig, rat and nagar (dragon).
The procession route is from the central hall to the Hti Hlaing Shin pagoda at the Pareinma village about4miles away and includes9elephants, 108 horses, 90 gold and silver carts and overathousand people.
the9elephants with the to be novices ဆင်စီးရှင်လောင်းများ
the 90 gold and silver carts with novices to be နွား လှည်းယဉ်ကြော့စီး ရှင်လောင်းများ
1 of the 90 gold and silver carts withanovice to be နွား လှည်းယဉ်ကြော့စီး ရှင်လောင်း
another of the 90 gold and silver carts with novice to be နွား လှည်းယဉ်ကြော့စီး ရှင်လောင်း
The future novices are feted by the famous traditional actors Mandalay Thein Zaw and Nann Win with the Mandalay Sein Duwa orchestra (saing ah phwet ဆိုင်းအဖွဲ့). Included also are the near extinct 90 ceremonial bullock carts နွား လှည်းယဉ်ကြော့များ.
There are music and dance entertainment at nights.
Free food has been offered to all for months.
For the ceremonial day 2559 monks including many famous Sayardaws / monks have been invited.
On the 16-May, donor of the day meal for the 5000 novices and 1000 senior monks, President U Than Sein, Daw Khin Khin Win and family will arrive and present the meal. That day famous singer Daw Yi Yi Thant and other Myanmar traditional singers will perform.
Beginning from 17 May, the novices will be taught Buddhism and meditation for 10 days.
From 20 – 24 May, Sayardaws will preach about the way to Nirvana.
On 28 and 29 May, Pho Chit traditional troupe will entertain the public.
Over3billion kyats 30,000 lakhs have been donated for the Koe Hse Hsa social associations in surrounding villages of Myaung township.
On the early morning of 16 May, since3a.m., the day of the water pouring donation ceremony, unexpected heavy rains and winds bring about havoc at the ceremony hall and novice halls with water entering the halls and damaging some halls.
the novice hall
The water pouring donation ceremony has been postponed to 24 May and the novices returned to where they come from.
the novices returned to where they come from.
Last, but not least, I would like to mention my thanks to various persons who helped me to write this article / post. First, to my younger son Linn Zaw Win who encouraged me to resume my posts, by sending me discussions he had online with his friends about my earlier posts. I thought no one cares about my posts but was surprised that they read and like some of my posts. I reviewed my posts on WordPress and found on the first page, the blog Htihlaing Shin ထီးလှိုင်ရှင် Kyansittha ကျန်စစ်သား / ကလန် စစ်သား posted April 3, 2012. This led to my discussion with LZW about my later knowledge about the location of Hti Hlaing which I did not know at the time. He encouraged me to writeablog regarding Pareinma and Hti Hlaing but although I have intended to extend it to include other places in Kyansittha’s life also, I have shortened the topic to Pareinma only so that I can finish and post earlier and readers will not be burdened byatoo long blog.
I have to thank Min Zaw Htun,afriend in my company who was born in the Buu Kaing village, near Pareinma and later moved to Myingyan. He told me about Parienma after we discussed the 5000 novices donation ရှင်၅၀၀၀ ထောင်အလှူ held outside his village during the hot season နွေ of 2015.
I searched for more data than I had read about on the internet and found2sites, the Pareinma – ပရိမ္မ.FB and the King Kyan Sis Thar FB sites which gave mealot of information about Pareinma that I had not known, in addition to the Wikipedia (where everyone has to turn to in order to get facts) and the travel sites.
My special thanks to King Kyan Sis Thar FB site which shared my Htihlaing Shin ထီးလှိုင်ရှင် Kyansittha ကျန်စစ်သား / ကလန် စစ်သား blog and also to the မြိတ်ခရိုင် စာရေးဆရာ များ အသင်း FB site who shared my photo of Myeik taken on the memorable cruise trip to Kawthaung, Ranong and Myeik with the m.v. Thanlwin. They liked my blog and photo and thought it worth sharing so more have seen the shared blog and photo (with caption_short note, which I took care to write on most of my posted photos although few seem to care about them, only taking in havingalook at the photos).
I first intended to use this postscript as an epilogue, but have saved this for the end of my blog and so, only the news about the 5000 novices initiation ceremony in Myanmar follows.
ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီမှ ပြုလုပ်သော ရှင်အပါး ၅၀၀၀ အလှူပွဲ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့၏ ပါရမီကုသိုလ် ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်လှူ ဒါန်းမှုဖြင့်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သံဃနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣဒ္ဓိဗလ အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဒမ္မ ဇောတိကဓဇ၊ ဇေယျာလူမှုထူးချွန် ပထမအဆင့်၊ “ကိုးဆယ်ဆအနန္တမေတ္တာရှင် ဆရာတော်” မှ ဦးစီးဦးဆောင်၍
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးသာအေး က ဦးဆောင်ကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီး၊
ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီမိသားစုတို့မှ မတည်လှူဒါန်း
သာသနာ့ဒါယကာ သာ သနာ့ဒါယိကာမအဖြစ် ရွှေသံလွင် မိသားစုကုမ္ပဏီမှ ရှင်အပါး ငါး ထောင်ရှင်ပြုအလှူပွဲကြီးကို မေ လ ၁၅ ရက်မှ ဇွန်လ ၁ ရက်အထိ ကျင်းပလျက်ရှိသည်။
ယင်းအလှူအတန်းပွဲကြီးကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး၊ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီ( Sky Net )တို့က
သိန်းပေါင်း ငါးသောင်းအကုန်အကျခံ၍ ကျင်းပသော ရှင် ၅၀၀၀ အလှူကြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်မှ တိုင်း ရင်းသားပေါင်း စုံ ရှင်သာမဏေလောင်း လျာ ငါးထောင်ကျော်တို့အား ရှစ် ပါးပရိက္ခရာစုံလင် စွာဖြင့် ပဗ္ဗဇ္ဇအမွေ ရှင်သာမဏေပြုပေးခြင်း အလှူ တော်မင်္ဂလာ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရှင်မပြုရသေးသည့် ကလေးငယ်များအား ရှင်ပြုပေးသည့် အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရှင်မပြုရသေးသည့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ရှင်သာမဏေ လောင်းလျာ ၅၀၀၀ တို့အား သာသနာ့ဘောင်အတွင်းသို့ သွတ်သွင်းခြင်း မင်္ဂလာ
စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း ရှင်မပြုရသေး တဲ့ ကလေးငယ်တွေ သာမက ပအို့ဝ်၊ ရှမ်း၊ ကရင်၊ မွန်၊ နာဂ စတဲ့ တိုင်းရင်းသားကလေးငယ် တွေ ပါဝင်ခဲ့တယ်။
ယင်းအလှူပွဲတွင် သာမဏေ များ ကြီးကြပ်တာဝန်ယူထားသော မကျည်း ဘုတ် ရွာကျောင်းမှ ဆရာ တော်တစ်ပါးက ”ဖေဖော်ဝါရီ လ လောက် က တည်းက စီစဉ်နေတာ ပါ။ မြောင်မြို့နယ်က ကျောင်းတိုက် အသီးသီးက ဆရာတော်တွေကလဲ ဒီမှာလာပြီး စီစဉ်ပေးကြ တယ်။ တစ်ခါမှ ရှင်မပြု ဖူးသေး တဲ့ အသက် ၁၀ နှစ်ကနေ ၁၆ နှစ်အတွင်း ကလေး ငယ်တွေ ကို ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးတွေကတစ်ဆင့် ရှင်သာမဏေပြု ဖို့ စာရင်းပေး ခိုင်းရပါတယ်။ နေ့စဉ် ပရိသတ် သောင်းချီကို စတုဒိသာ ကျွေးနေတာပါ။ အလှူက ဒီလကုန် လောက်ထိ ကျင်းပသွားမှာပါ”ဟု အလှူပွဲစီစဉ်မှုများကို မိန့်ကြားသည်။
အလှူတော်မင်္ဂလာမဏ္ဍပ်နှင့် စတုဒိသာကျွေးမွေးသည့် မြေနေရာ မှာ ဘူးကိုင်း စံပြကျေးရွာ အနောက် မြောက်ဘက် မြေပဲစိုက်ကွင်းများရှိ သုံးဧကခန့်ကျယ်ဝန်းသော နေရာ၌ တည်ရှိပြီး ရွှေတိဂုံပုံတူ စေတီတော်၊ အလှူဗဟိုမဏ္ဍပ်၊ ရှင်လောင်းများ ထားရာနေရာ၊ ကျန်းမာရေးဌာ နနှင့် ပြန်ကြားရေး ဌာနများ၊ သန့်စင်ခန်း များ တည်ဆောက်ထားသည်။
စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြောင်မြို့ နယ်၊ ဘူးကိုင်းစံပြကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သည့် ရှင်အပါး ငါးထောင်အလှူ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ မေလ ၁၅ ရက်နံနက်က ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်။
အလှူတော်မင်္ဂလာ မုခ်ဦးဖွင့် ပွဲကို ဆရာတော်နှင့်တကွ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေ သကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ၊ ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီမိသားစု ဝင်များတို့က စက်ခလုတ်နှိပ်၍ ဖဲကြိုး ဖြတ် ဖွင့်ပေးခဲ့ကြသည်။
ညပိုငျးဆိုရငျလဲ ရိုးရာ အကတှနေဲ့ ဖြျောဖွကွေတယျ။
အလှူ လှညျ့ရာမှာ ရှဆေုံ့းကဘုရားပနျး ကိုငျ၊ ပရိတျအိုးတှရှေကျတဲ့လူကွီး တှပေေါ့။ နောကျပွီးဘုရားပငျ့လာ တဲ့ယာဉျက နဂါးပုံစံပါ၊ ပါးစပျက လဲ အငှတှေ့ထေုတျတယျ။ နောကျက ဂဠုနျပုံပါ။ အဲဒီနော ကျမှ ဆငျတှေ၊ မွငျးတှေ၊ နှားလှညျးတှေ၊ ပုဂံ၊ အငျး ဝ၊ ကုနျးဘောငျ စတဲ့ ဝတျစားဆငျ ယငျမှုတှနေဲ့ လူပရိသတျတှလေိုကျ လာတယျ။ မဏ်ဍပျထဲမှာလဲ တရုတျ နဂါးလိုပုံ စံတှထေားတယျ။ နနေံ့ အလိုကျ ရုပျပုံတှရေော ခြိတျထား တယျ။ အဲဒီလိုအလှူပှဲကွီးမြိုး မတှဖေူ့းသေးဘူး။ လမျးကနထှေကျ ကွညျ့ကွတဲ့လူတှကေလဲ သောငျးခြီ ရှိတယျ။ ဇာတျမငျးသားကွီး မန်တလေး သိနျးဇျောရဲ့ ဘိသိကျသှနျးတာကို ရော ကွညျ့ခငျြလို့ပါ”ဟု မွောငျမွို့ နယျ ကြားအိုကြေးရှာမှ လာရောကျ ကွညျ့ရှုသူ အမြိုးသမီးတဈဦးက ပွောသညျ။
ရှင်လောင်း လှည့်ရာ လမ်း ကြောင်း မှာ ဘူးကိုင်းရွာ ကိုးဆယ်ဆ အနန္တမေတ္တာ အလှူမင်္ဂလာ ဗဟိုမဏ္ဍပ် နှင့် လေးမိုင်ခန့်ကွာဝေးသော ပုဂံ ခေတ် ကျန် စစ်သား မင်းကြီး မွေးဖွား ရာ၊ ပရိမ္မကျေးရွာ၊ ထီးလှိုင်ရှင်စေ တီ တော်မြတ်ကြီးအထိ ဆင်ရတနာကိုး စီး၊ မြင်းရတနာ ၁၀၈စီး၊ ရွှေလှည်း ငွေလှည်း အစီး ၉ဝအပါအဝင် လူ ပရိသတ်ထောင်ကျော်ဖြင့် လှည့်လည် ခဲ့ကြသည်။
ရှင်လောင်းများကို မန္တလေးမြို့ စိန်ဒူးဝါးဆိုင်းအဖွဲ့နှင့်အတူ မင်းသားမန္တလေးသိန်းဇော်၊ နန်းဝင်းတို့က ဘိသိက် သွန်းလောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။
အညာဒေသတွင် ပျောက် ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေသည့် နွား လှည်းယဉ်ကြော့များကို အစီး ၉၀ ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ရာ လှည်း ယဉ် အများဆုံးဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲ ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲတွင် နဂါးရုပ်နှင့် ဂဠုန်ရုပ်များကို အသုံးပြုခဲ့၍ ယတြာချေသည့်အနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဒေသခံများက ခန့်မှန်းနေကြသည်။
‘‘ရှင်ငါးထောင် အလှူလှည့် ပွဲမှာ တောင်သူတွေ စိတ်ဝင်စား မှုအများဆုံးကတော့ နွားလှည်း ယဉ်ကြော့ အစီး ၉၀ တန်းစီ မောင်းတာကိုပဲ။ လှည်းယဉ်ကြော့က အညာဒေသမှာ ပျောက်ကွယ်လုဆဲဆဲ၊ အခုလို နွားလှည်းယဉ်တွေ အများကြီးတန်းစီ မောင်းတာ တစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ ဆင်တွေ၊ မြင်းတွေ၊ နွားလှည်းယဉ်တွေနဲ့ ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲ အစည်ကားဆုံးလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲမှာ နဂါးရုပ်တွေ၊ ဂဠုန်ရုပ်တွေ၊ ဆင်တွေ၊ မြင်းတွေ၊ နွားလှည်းယဉ်တွေက ဗေဒင်ယတြာချေတယ်လို့လည်း ပြောနေကြတယ်’’ဟု ရှင်ငါးထောင်အလှူလှည့်ပွဲသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သော ချောင်းဦးမြို့နယ် ဒေသခံတောင်သူတစ်ဦးကပြောသည်။
နွားလှည်း ယဉ်တွေကိုတော့ စစ်ကိုင်းမြို့က ငှားရမ်းခဲ့တာပါ။ ဆင်ကိုတော့ သစ်တောဦးစီးဌာနက ဖြစ်ပါ တယ်။ မြင်းကိုတော့ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က ငှားရမ်းခဲ့တယ်’’ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးတင့်လှိုင်မြင့်က ပြောကြား သည်။
ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲ ဖြတ်သန်း သွားရာ လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ အုတ် နှဲဘုတ် ရွာမှ အသက် ၈၀ အရွယ် ဒေါ်ချိုက ”တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့ အလှူပွဲကြီး မျိုး မမြင်ဖူးလို့ သာဓုခေါ်ချင်လို့ လာ ကြည့်တာပါ။ ဆရာတော် က မြောင် နယ် လက်ပံရွာမှာမွေးပေမယ့် ဘူး ကိုင်းမှာ သာမဏေဝတ် ခဲ့တော့ ကျေး ဇူးဆပ်ပွဲပြုလုပ်တာထင်ပါရဲ့။ အရင် ကလဲ ရှင်အပါးတစ်ရာ လုပ်ခဲ့ဖူး တယ်။ ရွာနီးချုပ်စပ်ကိုလဲ စတုဒိသာ ထမင်းကျွေးနေတာ လချီနေပြီ။ အလှူက မလုပ်ခင်ကတည်းက လူ အများစိတ်ဝင်စားနေ တဲ့ပွဲပါ”ဟု ပြော သည်။
ရှငျအပါးငါးထောငျ အလှူပှဲ တှငျ နိုငျငံတျောဩဝါဒါစရိယ ဆရာ တျောကွီးမြား၊ နိုငျငံတျော သံဃမဟာ နာယက၊ နိုငျငံတျော ဗဟိုသံဃာ့ ဝနျ ဆောငျဆရာတျောကွီးမြား၊ တိပိဋက ဓရ၊ တိပိဋကကောဝိ ဒဆရာတျောမြား၊ ဂိုဏျးပေါငျးစုံ သံဃနာယကအဖှဲ့ဝငျ ဆရာတျောကွီး မြား အမှူးပွုသော ပငျ့သံဃာ ၂၅၅၉ ပါးတို့အားလညျး ပငျ့လြှောကျထားပွီး နဆှေ့မျး၊သင်ျကနျး အစရှိသော လှူဖှယျတို့ကို ဆကျကပျ လှူဒါနျးမညျဖွဈသညျ။
မေ ၁၆ ရကျ၌လညျး ရှငျသာ မဏအေပါးငါးထောငျနှငျ့ ကွီးကွပျ ဆရာတျော အပါး ၁၀၀၀ တို့အား နဆှေ့မျးအလှူရှငျ နိုငျငံတျောသမ်မတ ဦးသိနျးစိနျနှငျ့ ဇနီး ဒျေါခငျခငျဝငျး မိသားစုတို့ လာရောကျ၍ နဆှေ့မျး ဆကျကပျလှူဒါနျးမညျဖွဈကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။ မေ ၁၇ ရကျ မှစ၍ ရှငျသာမဏေ အပါး ငါး ထောငျကြျောတို့အား ဆရာတျော ဘဒ်ဒန်တဣဒ်ဓိဗလနှငျ့ ကိုးဘှဲ့ရ ဆရာ တျော အရှငျအာစာရာ လင်ျကာရတို့ က ဗုဒ်ဓဘာသာယဉျကြေးလိမ်မာသငျ တနျးပို့ခခြွငျးနှငျ့ တရားရှုမှတျနညျး မြားကို ၁၀ ရကျတိုငျတိုငျ နေ့၊ ည သငျကွားပေး သှားမညျဖွဈကွောငျး သိရ သညျ။
ယငျးနတှေ့ငျ နိုငျငံကြျောတေး သံရှငျ ဒျေါရီရီသနျ့နှငျ့ မွနျမာမှုတေး သံရှငျမြားက သီဆိုဧညျ့ခံဖြျောဖွေ ပွီး နိုငျငံကြျော ဓမ်မကထိက ဆရာ တျောမြားက မေ ၂၀ ရကျမှ ၂၄ ရကျ အထိ ငါးရကျတိုငျ တိုငျ နိဗ်ဗာနျရောကျ ကွောငျး တရားတျောမြား ဟောကွား မညျဖွဈသညျ။
ထို့ပွငျ မေ ၂၈ ရကျနှငျ့ ၂၉ ရကျ ညပိုငျးတှငျ မွို့ရှမေနျးသားဖိုးခဈြဇာတျ အဖှဲ့မှ ဧညျ့ခံကပွသှားမညျဖွဈ ကွောငျးသိရသညျ။ ရနျကုနျတိုငျးဒေ သကွီး သံဃနာ ယကအဖှဲ့ဥက်ကဋ်ဌ ဆရာတျော ဘဒ်ဒန်တ ဣဒ်ဓိဗလသညျ မွောငျမွို့နယျအတှငျး ရှိ တဲသာ၊ ဘူးကိုငျး၊ သီရိဇယြော၊ အုတျနှဲဘုတျ၊ ကြားအို၊ ရှပေနျး၊ လကျ ပံ၊ ရှယေငျးမာ၊ ပရိမ်မ စသောကြေး ရှာမြား၌ ကိုးဆယျဆ အနန်တမတေ် တာ ပရဟိတလူမှုရေး အသငျးမြားကို ထူ ထောငျပေးထားပွီး အဆိုပါလူမှု အသငျးမြားထံသို့ ငှကေပျြသိနျးပေါငျး သုံးသောငျးကြျော ထောကျပံ့လှူဒါနျး ထားပွီဖွဈကွောငျး ဘူးကိုငျး ရှာလူမှု ကူညီရေး အသငျးအဖှဲ့ဝငျ ကိုထှနျး မငျးလတျကပွောသညျ။
အလှူရေစက်ချ အခမ်းအနားကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည့် မေလ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခြင်း၊ လေပြင်းတိုက်ခတ် ခြင်းတို့ကြောင့် ရှင်ငါးထောင် အလှူပွဲကျင်းပလျက်ရှိသည့် ဗဟိုမဏ္ဍပ်အပါအဝင် ရှင်သာမဏေ များ သီတင်းသုံးသည့် မဏ္ဍပ်များ တွင် မိုးရေများ ဝင်ရောက်ကာ မဏ္ဍပ်အချို့ ယိုင်လဲခဲ့သည်။
ရာသီဥတုကလည်း မိုးရွာတာပဲရှိတာပါ။ လေပြင်း လုံးဝမတိုက်ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ရှင်အပါး ၅၀၀၀ ပွဲကတော့ အောင်အောင်မြင်မြင် ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကူညီဝိုင်းဝန်းပေးသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇင်က ပြောကြားသည်။
“မိုးက မနက်အစောပိုင်းမှာ သည်းသည်းမည်းမည်းကို ရွာတာ။ အချို့မဏ္ဍပ်တွေမှာ မိုးကာရှိပေမယ့် အချို့မဏ္ဍပ်တွေက ထန်းလက်တွေနဲ့ မိုးထားတော့ မိုးမလုံဘူး။ ကိုရင်တွေကလည်း ငါးထောင်ဆိုတော့ မိုးရွာတဲ့အချိန် နေရာရွှေ့ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်တော့ မဏ္ဍပ်တွေ ဆောက်ထားတဲ့ ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးထဲမှာ အထုပ်တွေဆွဲပြီး ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ပေါ့” ဟုအဆိုပါအလှူပွဲသို့ ရောက်ရှိနေသည့် ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ဆိုသည်
‘‘မနက် ၃ နာရီဝန်းကျင်က တည်းက လေတွေလည်း တိုက် မိုးတွေလည်း သည်းနေခဲ့တာ။ မနက်မိုးလင်းတော့ ရှင်လောင်း တွေနေတဲ့ မဏ္ဍပ်အချို့က လဲနေ တယ်။ မဏ္ဍပ်တော်တော်များများ ရေတွေ ဝင်နေတာ။ ရှင်လောင်း တွေကိုလည်း ရေလွတ်ရာ ကျောက် ရစ်စာသင်ကျောင်းကို ယာယီပြောင်းရွှေ့ထားတယ်။ ရှင်သာမဏေတွေ ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူး’’ဟု ကျောက်ရစ်ကျေးရွာ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်
“မိုးက မနက် ၂ နာရီကျော်လောက်မှာ ရွာတာ။ ရေလည်းများတယ်။ မိုးက တခြားဒေသတွေမှာ နည်းနည်းရွာပြီးတော့ ဒီအလှူ လုပ်တဲ့ ဒေသဘက်မှာ အရမ်းများတော့ မဏ္ဍပ်တွေထဲမှာ ရေတွေဝင်ပြီး နစ်ကုန်တယ်။ တချို့မဏ္ဍပ်တွေဆို ပြိုကျသွားတယ်”ဟု ဒေသခံ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် မဟာမဏ္ဍပ်တစ်ခုနဲ့ ရှင်သာမဏေ မဏ္ဍပ်လေးခုလောက် ယိုင်နဲ့သွားပါတယ်။ ကြီးကြီးမားမား ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာမျိုး မရှိပါဘူး။
ယင်းကဲ့သို့ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ငွေကျပ် သိန်းပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မှုများလည်း ရှိနေကြသည်။
‘‘ဒီနေ့မနက် မိုးတွေ အရမ်း သည်း၊ လေတွေတိုက်လို့ အလှူ ရေစက်ချမယ့်ရက်ကို မေလ ၂၄ ရက်နေ့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်တာပါ။ စောစောက ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ဖို့ စီစဉ်ထားတာ။ ရှင်လောင်းတွေက မနေ့ကတည်းက ရှင်သာမဏေအဖြစ် ဝတ်ပြီးပြီဖြစ် တဲ့အတွက် အလှူပွဲက ရေစက်ချ ဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်’’ဟု စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ တာ ဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကျင်းပသော မြောင်မြို့နယ်မှ သာမဏေငါးထောင် ရှင်ပြုအလှူပွဲသို့ မေလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန် တက်ရောက်ရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း ယင်းနေ့နံနက် အစောပိုင်းက မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး မဏ္ဍပ်များအတွင်း ရေဝင်ရောက်ခဲ့သောကြောင့် သမ္မတခရီးစဉ် ပျက်ပြယ်ခဲ့ကြောင်း အလှူပွဲတွင် တာဝန်ကျနေသည့် အစိုးရဝန်ထမ်းများနှင့် အလှူပွဲသို့ ရောက်ရှိနေသူများထံမှ သိရသည်
မေလ ၁၆ ရက်နေ့က ရေစက်ချရန် စီစဉ်ထားခဲ့သော်လည်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့သောကြောင့် မေလ၂၄ ရက် နေ့မှသာ ရေစက်ချတော့မည်ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ရက်ရွှေ့လိုက်တာ ဟုတ်ပါတယ်။ နေရာကတော့ ဘူးကိုင်းစံပြကျေးရွာ အနီးမှာပဲ ပြန်လုပ်မှာပါ”ဟု သူကဆိုသည်။
မေ ၁၆ ရက် နံနက်အစောပိုင်းက ရွာသွန်းခဲ့သည့် မိုးကြောင့် ရှင်အပါး ၅၀၀၀ ကျော်အား အလှူမဏ္ဍပ်များအတွင်း၌ ရေများဝင်ရောက်နေခြင်းကြောင့် ဘူးကိုင်းစံပြကျေးရွာအနီးရှိ ကျောက်ရစ်စံပြကျေးရွာတွင် ဆွမ်းလောင်းပွဲအား ပြောင်းရွှေ့ပြုလုပ်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ရှင်သာမဏေများ သီတင်းသုံးသည့် ယာယီစံကျောင်းများ ပြိုကြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် ရှင်သာမဏေ များ မိမိနေရပ်များသို့ အသီးသီးပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ယင်းပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် သာမဏေ အများစုကို မေလ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက မိမိရပ်ရွာများသို့ ပြန်နိုင်ရန် ကားများ စီစဉ်ပေးနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ ပရိသတ်များသောကြောင့် ရှင်သာမဏေလောင်းများနှင့် ၎င်းတို့ မိသားစုဝင်များ လူစုကွဲသည်များလည်း ရှိကြောင်း အလှူပွဲတွင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေသည့် မုံရွာမြို့ခံ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ “ကျောက်ရစ်ရွာက ထွက်တာနဲ့ လမ်းတွေသွားလို့ မရတော့ဘူး။ ရွှံ့တွေဗွက်တွေနဲ့ ကားတွေဆိုတာလည်း ဆင်းတွန်းနေရတယ်” ဟု သူကဆိုသည်။
မေလ ၁၅ ရက်နေ့ နှင့် ၁၆ ရက်နေ့များတွင် စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြောင်မြို့ နယ်၊ ဘူးကိုင်းစံပြကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်မည့် ရှင်ငါးထောင်အလှူ ပွဲမတိုင်မှီ ယနေ့ မေလ ၁၄ ရက်နေ့ တွင် ရဟန်း၊ ရှင်သာမဏေ များလောင်းများနှင့် ပြင်ဆင် နေမှုများကိုတွေ့ရစဉ်။
မြောင်မြို့နယ် ဘူးကိုင်းစံပြကျေးရွာတွင် အတုမရှိမဟာကုသိုလ်တော် ရှင်ငါးထောင် အလှူ ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပ
နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပါရမီကုသိုလ်အဖြစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့က ဦးဆောင် ကာ ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီက မတည်လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်
မြောင်မြို့၊ မေ ၁၅-ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး သံဃနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိ ကဓဇ ဘဒ္ဒန္တဣဒ္ဓိဗလ (ဇေယျာလူမှု ထူးချွန် ပထမဆုရ) ဦးဆောင်သော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြောင်မြို့ နယ် ဘူးကိုင်းစံပြကျေးရွာ ပထမအ ကြိမ် အတုမရှိ မဟာကုသိုလ်တော် ဖြစ်သည့် ရှင်သာမဏေမပြုရသေး သော မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်မှ တိုင်း ရင်းသားပေါင်း စုံ ရှင်သာမဏေလောင်း လျာ ငါးထောင်ကျော်တို့အား ရှစ် ပါးပရိက္ခရာစုံလင် စွာဖြင့် ပဗ္ဗဇ္ဇအမွေ ရှင်သာမဏေပြုပေးခြင်း အလှူ တော်မင်္ဂလာ၏ ရှင်လောင်း လှည့်ပွဲ ကို မေ ၁၅ ရက် နံနက်ပိုင်းက မြန်မာ့ ရိုးရာဓလေ့နှင့် အညီ စည်ကားသိုက် မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါရှင်ပြုပွဲကို ပြည်ထောင် စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ အဖွဲ့က ပါရမီကုသိုလ်ပံ့ပိုးဆောင် ရွက်လှူဒါန်းပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ ကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာ အေးက ဦးဆောင်ကော်မတီဖွဲ့စည်း ကာ ရန်ကုန်မြို့ ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီ မိသားစုမှ မတည်လှူဒါန်း ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
အလှူတော်မင်္ဂလာ မုခ်ဦးဖွင့် ပွဲကို ဆရာတော်နှင့်တကွ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေ သကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ၊ ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီမိသားစု ဝင်များတို့က စက်ခလုတ်နှိပ်၍ ဖဲကြိုး ဖြတ် ဖွင့်ပေးခဲ့ကြသည်။ အလှူတော် မင်္ဂလာ၏ ရှင်လောင်း လှည့်ရာ လမ်း ကြောင်း မှာ ဘူးကိုင်းရွာ ကိုးဆယ်ဆ အနန္တမေတ္တာ အလှူမင်္ဂလာ ဗဟိုမဏ္ဍပ် နှင့် လေးမိုင်ခန့်ကွာဝေးသော ပုဂံ ခေတ် ကျန် စစ်သား မင်းကြီး မွေးဖွား ရာ၊ ပရိမ္မကျေးရွာ၊ ထီးလှိုင်ရှင်စေ တီ တော်မြတ်ကြီးအထိ ဆင်ရတနာကိုး စီး၊ မြင်းရတနာ ၁၀၈စီး၊ ရွှေလှည်း ငွေလှည်း အစီး ၉ဝအပါအဝင် လူ ပရိသတ်ထောင်ကျော်ဖြင့် လှည့်လည် ခဲ့ကြသည်။
”အလှူကို တခွားရှာတှကေလဲ ကားတှနေဲ့ လာကွညျ့ကွတာ။ လမျး ကရှာတှကေလဲ အလှူလှညျ့လိုကျတဲ့ သူတှကေို ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ အစား အသောကျတှနေဲ့ ဒါနပွုဧညျ့ခံကြှေး မှေးကွတယျ။ တိုငျးရငျး သားပေါငျးစုံ ဆိုတော့ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသားလေး တှကေလဲ သူတို့မောငျ ရငျလောငျး လေးတှကေို သူတို့ရိုးရာပုံစံဆငျပေး ကွတယျ။ ညပိုငျးဆိုရငျလဲ ရိုးရာ အကတှနေဲ့ ဖြျောဖွကွေတယျ။ အလှူ လှညျ့ရာမှာ ရှဆေုံ့းကဘုရားပနျး ကိုငျ၊ ပရိတျအိုးတှရှေကျတဲ့လူကွီး တှပေေါ့။ နောကျပွီးဘုရားပငျ့လာ တဲ့ယာဉျက နဂါးပုံစံပါ၊ ပါးစပျက လဲ အငှတှေ့ထေုတျတယျ။ နောကျက ဂဠုနျပုံပါ။ အဲဒီနော ကျမှ ဆငျတှေ၊ မွငျးတှေ၊ နှားလှညျးတှေ၊ ပုဂံ၊ အငျး ဝ၊ ကုနျးဘောငျ စတဲ့ ဝတျစားဆငျ ယငျမှုတှနေဲ့ လူပရိသတျတှလေိုကျ လာတယျ။ မဏ်ဍပျထဲမှာလဲ တရုတျ နဂါးလိုပုံ စံတှထေားတယျ။ နနေံ့ အလိုကျ ရုပျပုံတှရေော ခြိတျထား တယျ။ အဲဒီလိုအလှူပှဲကွီးမြိုး မတှဖေူ့းသေးဘူး။ လမျးကနထှေကျ ကွညျ့ကွတဲ့လူတှကေလဲ သောငျးခြီ ရှိတယျ။ ဇာတျမငျးသားကွီး မန်တလေး သိနျးဇျောရဲ့ ဘိသိကျသှနျးတာကို ရော ကွညျ့ခငျြလို့ပါ”ဟု မွောငျမွို့ နယျ ကြားအိုကြေးရှာမှ လာရောကျ ကွညျ့ရှုသူ အမြိုးသမီးတဈဦးက ပွောသညျ။
ရှငျငါးထောငျအလှူတျောမင်ျဂ လာပှဲအတှကျ မတညျအလှူရှငျဖွဈ သူ ရှသေံလှငျမိသားစု၏ မိခငျကွီး သီဟသုဓမ်မသိင်ျဂီ၊ သီရိသုဓမ်မသိင်ျဂီ၊ အဂ်ဂမဟာ သီရိသုဓမ်မသိင်ျဂီ ဒျေါနီနီ က ”ဒီနလေို့ အလှူမြိုး လှူခှငျ့ကွုံ၊ လှူခှငျ့ရလို့ ပွောမပွတတျအောငျ အနျတီကွညျနူးပီတိဖွဈမိတယျ။ အဲဒီ လိုလှူဒါနျးရတဲ့အကြိုးကွောငျ့ တဈ နိုငျငံလုံး၊ တဈကမ်ဘာလုံး အေးခမျြး ကွပါစလေို့ ဆုတောငျး ပေးပါတယျ။ အားလုံးကို အလှူအမြှပေးဝေ ပါတယျ။ ဗုဒ်ဓဘာသာ မွနျမာ့ရိုးရာကို နောငျ လာနောကျသားတှေ ထိနျးသိမျးစေ ခငျြတယျ။ ဗုဒ်ဓဘုရားကိုလဲ ကွညျညို စေ ခငျြတယျ။ ဆရာတျောကွီး က အမိနျ့ရှိလို့လဲ ခုလိုလှူဒါနျးဖွဈတာ ပါ။ ရှငျမပွုရသေးတဲ့ တိုငျးရငျးသား တှကေို ရှငျလောငျးဝတျစုံလေးနဲ့ မွငျရတာ ပီတိဖွဈမိပါတယျ”ဟု အလှူ ပှဲအတှကျ ကွညျနူးမှုအား ပွောပွ သညျ။
သတင်းမြင်ကွင်း အပြည့်အစုံသို့ =>http://goo.gl/K4dHEo
စစ်ကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်၏ ရှင်အပါးငါးထောင် ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲတွင် ဆင်၊ မြင်း၊ နွား နှစ်ရာကျော် အသုံးပြု
Sat, 2015-05-16 06:30
No.735 Saturday, May 16, 2015
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးဦးဆောင် လှူဒါန်းသည့် ရှင်အပါးငါးထောင် ရှင်လောင်းလှည့်လည်ပွဲတွင် ဆင်ကိုးကောင်၊ မြင်း ၁၀၈ ကောင်အပြင် အညာဒေသတွင် ပျောက် ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေသည့် နွား လှည်းယဉ်ကြော့များကို အစီး ၉၀ ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ရာ လှည်း ယဉ် အများဆုံးဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲ ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ရှင်အပါးငါးထောင် ရှင်လောင်းလှည့်လည်ပွဲကို မေလ၁၅ ရက်က ဆင်ကိုးကောင်၊ မြင်း၁၀၈ ကောင်၊ နွားလှည်းယဉ်ကြော့ ၉၀ စီတို့ဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပြီး ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲတွင် နဂါးရုပ်နှင့် ဂဠုန်ရုပ်များကို အသုံးပြုခဲ့၍ ယတြာချေသည့်အနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဒေသခံများက ခန့်မှန်းနေကြသည်။
အဆိုပါရှင်လောင်းလှည့်ပွဲ ကို ဘူးကိုင်းရှိ ဗဟိုမဏ္ဍပ်မှ ကျန်စစ်သားမင်း မွေးဖွားသော ပရိမ္မကျေးရွာရှိ ထီးလှိုင်ရှင်စေတီတော်ကြီးသို့ လှည့်လည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရှင်လောင်းများကို မန္တလေးမြို့ စိန်ဒူးဝါးဆိုင်းအဖွဲ့နှင့်အတူ မင်းသားမန္တလေးသိန်းဇော်၊ နန်းဝင်းတို့က ဘိသိက် သွန်းလောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။
‘‘ဒီနေ့အလှူလှည့်ပွဲမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း ရှင်မပြုရသေး တဲ့ ကလေးငယ်တွေ သာမက ပအို့ဝ်၊ ရှမ်း၊ ကရင်၊ မွန်၊ နာဂ စတဲ့ တိုင်းရင်းသားကလေးငယ် တွေ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ နွားလှည်း ယဉ်တွေကိုတော့ စစ်ကိုင်းမြို့က ငှားရမ်းခဲ့တာပါ။ ဆင်ကိုတော့ သစ်တောဦးစီးဌာနက ဖြစ်ပါ တယ်။ မြင်းကိုတော့ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က ငှားရမ်းခဲ့တယ်’’ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးတင့်လှိုင်မြင့်က ပြောကြား သည်။
ရှင်သာမဏေလောင်းများ အား သာမဏေအဖြစ် ကူးပြောင်း မည့် ရှင်ငါးထောင်အလှူပွဲအခမ်း အနားကို မေလ ၁၆ ရက်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအခမ်း အနားသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတအပါ အဝင် နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ဖွယ် ရှိကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ သတင်းရရှိသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်တက်ရောက်မည့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြောင်မြို့နယ်၊ ဘူးကိုင်းကျေးရွာမှ ရှင်အပါး ၅၀၀၀ အလှူပွဲကို မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရပ်နားလိုက်ရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ရှင်အပါး ၅၀၀၀ပွဲ အလှူအ၀င်နေ့ ဖြစ်သည့် မေလ (၁၅) တွင် ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ပြီး ယင်းနေ့ညမှာပင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့သကဲ့သို့ မိုးသည် အလှူကြီးနေ့ မေလ ၁၆ ရက် နံနက် ၄ နာရီအချိန်တွင်လည်း မိုးရွာသွန်းခဲ့သည်ဟု ဒေသခံတဦးကပြောသည်။
၄င်းက” မိုးရွာတော့ ရေတွေက ခြေသလုံးလောက်ဖြစ်နေတယ်။ မဏ္ဍပ်တိုင်တွေယိုင်တာ တွေရှိတယ်။ တချို့မဏ္ဍပ်တွေ ပြားကုန်တယ်။ ရေတွေတော်တော်ဝင်တယ်လေ။ အခင်းကော်ဇောတွေလည်းစိုကုန်တယ်။ ပွဲကတော့ နားထားလိုက်ရပြီ။ ကိုရင်တွေလည်း ပြန်ကြွသွားပါပြီ။” ဟု ပြောသည်။
အစိုးရအဖွဲ့ပံပိုးကျင်းပသည့် ရှင်ပြုပွဲ မိုးသည်းသဖြင့် သမ္မတတက်မည့် အစီအစဉ်ပျက်
မုံရွာ၊ မေ ၁၆
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကျင်းပသော မြောင်မြို့နယ်မှ သာမဏေငါးထောင် ရှင်ပြုအလှူပွဲသို့ မေလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန် တက်ရောက်ရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း ယင်းနေ့နံနက် အစောပိုင်းက မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး မဏ္ဍပ်များအတွင်း ရေဝင်ရောက်ခဲ့သောကြောင့် သမ္မတခရီးစဉ် ပျက်ပြယ်ခဲ့ကြောင်း အလှူပွဲတွင် တာဝန်ကျနေသည့် အစိုးရဝန်ထမ်းများနှင့် အလှူပွဲသို့ ရောက်ရှိနေသူများထံမှ သိရသည်။
“မိုးက မနက်အစောပိုင်းမှာ သည်းသည်းမည်းမည်းကို ရွာတာ။ အချို့မဏ္ဍပ်တွေမှာ မိုးကာရှိပေမယ့် အချို့မဏ္ဍပ်တွေက ထန်းလက်တွေနဲ့ မိုးထားတော့ မိုးမလုံဘူး။ ကိုရင်တွေကလည်း ငါးထောင်ဆိုတော့ မိုးရွာတဲ့အချိန် နေရာရွှေ့ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်တော့ မဏ္ဍပ်တွေ ဆောက်ထားတဲ့ ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးထဲမှာ အထုပ်တွေဆွဲပြီး ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ပေါ့” ဟုအဆိုပါအလှူပွဲသို့ ရောက်ရှိနေသည့် ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ရှင်ငါးထောင်ကျော် အလှူတော်ပွဲကို မေလ ၁၅ ရက်နေ့က စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြောင်မြို့နယ် ဘူးကိုင်းစံပြကျေးရွာ မုခ်ဦးဖွင့်ပွဲနှင့်အတူ ကျင်းပခဲ့ရာ ယင်းနေ့တွင် ဆင်ကိုးကောင်၊ မြင်း ၁၀၈ ကောင်နှင့် နွားလှည်းပေါင်း ၉၀ ဖြင့် ခုနစ်မိုင်ခန့် ဝေးကွာသည့်ခရီးကို ရှင်လောင်း လှည့်လည်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရှင်ပြုပွဲကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးက ဦးဆောင်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းကာ ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီ မိသားစုက မတည်လှူဒါန်းပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့က ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန် တက်ရောက်ရန် စီစဉ်ထားသည့် ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီမှ ပြုလုပ်သော ရှင်အပါး ၅၀၀၀ အလှူပွဲ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် မဏ္ဍပ်များပြိုကျပျက်စီးပြီး သမ္မတခရီးစဉ် ပျက်ပြယ် –
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းခရိုင် မြောင်မြို့နယ် ဘူးကိုင်းစံပြကျေးရွာ၌ ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီမှ ပြုလုပ်သော ရှင်အပါး ၅၀၀၀ အလှူပွဲတွင် မေ ၁၆ ရက် နံနက်ပိုင်း အစောပိုင်းအချိန်က အဆိုပါ အလှူပြုလုပ်နေသည့်ဒေသ၌ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့ခြင်းကြောင့် အလှူမဏ္ဍပ်များ ပြိုကျပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အပြင် အလှူတော်မင်္ဂလာ ရေစက်ချပွဲသို့ တက်ရောက်မည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ခရီးစဉ်လည်း ပျက်ပြယ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရှင်အပါး ၅၀၀၀ အလှူ တော်မင်္ဂလာပွဲသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ လာရောက်ရန် စီစဉ်ထားခဲ့သော်လည်း ယင်းနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့ခြင်းကြောင့် အစီအစဉ်ပျက်ပြယ်သွားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့ ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ကာ ပြုလုပ်နေသည့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရှင်မပြုရသေးသည့် ကလေးငယ်များအား ရှင်ပြုပေးသည့် အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲအား မေ ၁၅ ရက်က စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ကလေးငယ်စုစုပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်အား ရှင်သာမဏေဘောင်အတွင်းသို့ အဆိုပါနေ့တွင် သွတ်သွင်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းနောက် မေ ၁၆ ရက် နံနက် ၂ နာရီအချိန်ခန့်၌ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့် ဆောက်လုပ်ထားသည့် အလှူတော်မင်္ဂလာမဏ္ဍပ်များအတွင်းသို့ ရေ၀င်နစ်မြုပ်ခြင်း၊ မဏ္ဍပ်အချို့ ပြိုကျပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသို့ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့ခြင်းကြောင့် အလှူတော်မင်္ဂလာ ရေစက်ချမင်္ဂလာအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ခရီးစဉ်ပါ ပျက်ပြယ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မေ ၁၆ ရက်တွင် ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည့် ရေစက်ချမင်္ဂလာ အခမ်းအနားအား မေ ၂၄ ရက်သို့ ပြောင်းရွှေ ခဲ့ရကြောင်းလည်း သိရသည်။
“အလှူပွဲက မိုးရွာပေမယ့် အထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရှင်အပါး ၅၀၀၀ ကျော်ကိုလည်း သာသနာ့ဘောင်အတွင်း သွတ်သွင်းပေးပြီးခဲ့ပြီလေ။ ဒါကြောင့် အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ ဒီအလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကြံ့ခိုင်မှုရှိရဲ့လားဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ အလှူတော်မင်္ဂလာရေစက်ချပွဲကိုတော့ မေ ၂၄ ရက်မှာ ဒီနေရာမှာပဲ ပြန်လုပ်သွားမယ်”ဟု ရှင်အပါး ၅၀၀၀ အလှူပွဲ ကျင်းပရာ၌ ဦးဆောင်ဆရာတော်ဖြစ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သံဃနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣဒ္ဓိဗလက မိန့်ကြားသည်။
“ကျွန်တော်တို့ မနေ့က ရှင်အပါး ၅၀၀၀ ကျော်ကို ရှင်သာမဏေဘ၀ကို အောင်မြင်စွာနဲ့ သွတ်သွင်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီနေ့မှာတော့ ရေစက်ချဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေအရ ရေစက်ချမင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ယာယီရပ်တန့်သွားတဲ့ သဘောပါ။
ရာသီဥတု ပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားပြီဆိုရင် ရေစက်ချ မဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ပြန်လည်ကျင်းပသွားမှာပါ။ ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် မဟာမဏ္ဍပ်တစ်ခုနဲ့ ရှင်သာမဏေ မဏ္ဍပ်လေးခုလောက် ယိုင်နဲ့သွားပါတယ်။ ကြီးကြီးမားမား ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာမျိုး မရှိပါဘူး။
ရှင်အပါး ၅၀၀၀ အလှူပွဲ၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ယခင်က ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည့် အစီအစဉ်များအား ယာယီရပ်နားထားလိုက်ကြောင်း ယင်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ယင်းကဲ့သို့ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ငွေကျပ် သိန်းပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မှုများလည်း ရှိနေကြသည်။
ရှင်အပါး ၅၀၀၀ အလှူပွဲအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့၏ ပါရမီကုသိုလ် ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်လှူ ဒါန်းမှုဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင် မြောင်မြို့နယ် ဘူးကိုင်းစံပြကျေးရွာတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သံဃနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣဒ္ဓိဗလအဂ္ဂမဟာ သဒ္ဒမ္မ ဇောတိကဓဇ၊ ဇေယျာလူမှုထူးချွန် ပထမအဆင့်၊ “ကိုးဆယ်ဆအနန္တမေတ္တာရှင် ဆရာတော်” မှ ဦးစီးဦးဆောင်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးသာအေး က ဦးဆောင်ကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီး၊ ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီမိသားစုတို့မှ မတည်လှူဒါန်းကာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရှင်မပြုရသေးသည့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ရှင်သာမဏေ လောင်းလျာ ၅၀၀၀ တို့အား သာသနာ့ဘောင်အတွင်းသို့ သွတ်သွင်းခြင်း မင်္ဂလာဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာထားချက်များအရ သိရသည်။
– See more at: http://www.news-eleven.com/%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8/%E1%80%9E%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%90%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%90%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%99%E1%81%B8%E1%80%8F%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%BD-%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%B3%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC-%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8#sthash.FFtcBwUX.dpuf
ရှင်ငါးထောင်အလှူပွဲ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရှင်သာမဏေများ မိမိနေရပ်များသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာ
စစ်ကိုင်း၊ မေ ၁၆
ယနေ့မေလ ၁၆ ရက်နေ့ မနက် ၄ နာရီအချိန် စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြောင်မြို့ နယ်၊ ဘူးကိုင်း စံပြကျေးရွာတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရှင်သာမဏေများ သီတင်းသုံးသည့် ယာယီစံကျောင်းများ ပြိုကြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် ရှင်သာမဏေ များ မိမိနေရပ်များသို့ အသီးသီးပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့မေလ ၁၆ ရက်နေ့ မနက် ၄ နာရီအချိန် စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြောင်မြို့ နယ်၊ ဘူးကိုင်းစံပြကျေးရွာတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရှင်သာမဏေများ သီတင်းသုံးသည့် ယာယီစံကျောင်းများ ပြိုကြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် ရှင်သာမဏေ များ မိမိနေရပ်များသို့ အသီးသီးပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတတက်ရောက်မည့် ရှင်အပါးငါးထောင် ရှင်ပြုအလှူအောင်ပွဲ မိုးသက်လေပြင်းကျသဖြင့် ရက်ရွှေ့ဆိုင်း
No.736 Sunday, May 17, 2015
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်း စိန်တက်ရောက်ရန် စီစဉ်ထား သည့် မြောင်မြို့နယ် ဘူးကိုင်းစံပြ ကျေးရွာ ရှင်အပါး ငါးထောင် ရှင်ပြု အလှူရေစက်ချအောင်ပွဲ အခမ်း အနားကို မိုးသက်လေပြင်း များကျရောက်မှုကြောင့် မေလ ၂၄ ရက်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
စစ်ကိုင်းခရိုင် မြောင်မြို့နယ် ဘူးကိုင်းစံပြကျေးရွာတွင် ရှင် အပါး ငါးထောင်ရှင်ပြုအလှူ ရေစက်ချ အောင်ပွဲအခမ်းအနား ကို မူလက မေလ ၁၆ ရက်၌ ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း ယင်းနေ့ နံနက်တွင် မိုးသက်လေ ပြင်းကျရောက်မှုကြောင့် ရက်ရွှေ့ ဆိုင်းခဲ့ရကြောင်း ကျင်းပရေး ကော်မတီမှ သိရသည်။
မြောင်မြို့နယ် ဘူးကိုင်းစံပြ ကျေးရွာ၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သံဃနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာ တော် ဘဒ္ဒန္တက္ကဒ္ဓိဗလ(အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မ ဇောတိကဓဇ၊ ဇေယျာလူမှု ထူးချွန်ပထမအဆင့်)ကိုးဆယ်ဆ အနန္တမေတ္တာရှင် ဆရာတော် ဦး ဆောင်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာ အေးက ဦးဆောင်ကော်မတီ ဖွဲ့ စည်းကာ သာသနာ့ဒါယကာ သာ သနာ့ဒါယိကာမအဖြစ် ရွှေသံလွင် မိသားစုကုမ္ပဏီမှ ရှင်အပါး ငါး ထောင်ရှင်ပြုအလှူပွဲကြီးကို မေ လ ၁၅ ရက်မှ ဇွန်လ ၁ ရက်အထိ ကျင်းပလျက်ရှိသည်။
‘‘မနက် ၃ နာရီဝန်းကျင်က တည်းက လေတွေလည်း တိုက် မိုးတွေလည်း သည်းနေခဲ့တာ။ မနက်မိုးလင်းတော့ ရှင်လောင်း တွေနေတဲ့ မဏ္ဍပ်အချို့က လဲနေ တယ်။ မဏ္ဍပ်တော်တော်များများ ရေတွေ ဝင်နေတာ။ ရှင်လောင်း တွေကိုလည်း ရေလွတ်ရာ ကျောက် ရစ်စာသင်ကျောင်းကို ယာယီပြောင်းရွှေ့ထားတယ်။ ရှင်သာမဏေတွေ ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူး’’ဟု ကျောက်ရစ်ကျေးရွာ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထိုအလှူ၏ ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲတွင် ဆင် ၉ ကောင်၊ မြင်း ၁၀၈ ကောင်၊ နွားလှည်းယဉ် ၉၀ စီးဖြင့် လှည့်လည်ခဲ့သည်။
King Kyan Sis Thar FB
various news sites from which I obtained the news and photos
Pareinma – ပရိမ္မ.FB
This entry was posted on December 23, 2015 at 7:56 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.